Kooxda Farsamada Doorashooyinka ee uu magacaabay Ra’isul Wasaare oo kulan yeeshay “SAWIRRO” - Hargeele - Wararka Somali State
Kooxda Farsamada Doorashooyinka ee uu magacaabay Ra’isul Wasaare oo kulan yeeshay “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)-Kooxda Farsamada Doorashooyinka ee uu magacaabay Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta oo Arbaca ah yeeshay kulan ay diiradda ku saarayeen arimaha farsamo ee mudnaanta u leh Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya si uu habsami uga fuliyo howlaha doorashooyinka ee uu xilsaaran yahay.
Guddigaan waxaa uu Ra’iisul Wasaaraha ay ka taageeri doonaan:
In qodobadii heshiiska lagu gaaray shirkii Golaha wadatashiga Qaranka 27 ka May 2021 loo fuliyo si habsami ah.
Xiriirinta dhamaan hayadaha ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka si loo hagaajiyo habsami u xiriirka hayadaha wada shaqeynaayo
In taageero farsamo uu siiyo guddiyada doorashooyinka.
4.Xiriirinta XR, Golaha wadatashiga Qaranka iyo bessha caalamka.
Doorashooyinka Soomaaliya waxa maamulaya hirgalintooda guddiyada madaxa bannaan ee heer Federal FIET iyo Heer dowlad Goboleed SIET iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka.
Kooxdan Ra’isul Wasaaruhu magacaabay waxa ay shaqadoodu ku kooban tahay in ay farsamo ahaan gacansiiyaan guddiyadaas kor ku xusan si howlaha doorashada ugu qabtaan si daahfuran oo madax bannaan.
Ciidanka Xoogga oo howlgal ka fuliyay gobolka Sh.Hoose